Dutchtown Main Streets' Warbixinta Sanadlaha ah ee 2021 • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Warbixinta Sannadlaha ah ee Waddooyinka Weyn ee Dutchtown 2021
Waxaan ku hanweynahay in aan aragno Dutchtown oo adkaysanaysa oo ay uga gudubto masiibada sanadka 2020. Gacan ku haynta deriskeena, DT2 · Downtown Dutchtown waxay samaysay horumar weyn xagga abaabulka tabaruceyaasha, soo dhawaynta ganacsiyada cusub, xaqiijinta horumarka Beerta Marquette, iyo wax kaloo badan. Waxaad wax ku saabsan 2020 ka akhriyi kartaa halkan.
Waa sannad kale ka dib, iyo dhibaatada caafimaad ee adduunku waa ay sii socotaa. Si kastaba ha ahaatee, bulshadeenu waxay sii waday horumarka ay ku samaynayso Dutchtown ka wanaagsan qof walba. Taasna, waa inaan dhammaanteen ahaannaa Dutchtown Faan.
Soo bandhigida Wadooyinka Muhiimka ah ee Dutchtown
Xagaagii 2021, ururka hore loogu yiqiin Downtown Dutchtown (DT2 oo gaaban) ayaa daaha ka qaaday magac cusub: Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown. Iyadoo ururku uu hore u lahaa baaxad ballaadhan marka loo eego agagaarka Meramec iyo Virginia, waxaanu dareennay inay muhiim tahay in aan deriskayaga u sheegno rumaynteena waddo kasta oo ku taal Dutchtown waa Jid Weyn.
Halkaas oo ganacsiyada iyo derisyadu ku wada koraan.
Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown waxay kor u qaadaan bulsho horumaraysa iyo barwaaqo la wadaago iyada oo fududaynaysa horumarka dhaqaalaha iyo kobcinta fursada xaafadda Dutchtown.
Soo jiitaan lahaanshaha kala duwan
Kor u qaad meelaha bannaan, meelaha, iyo wejiyada
Barnaamijka Tijaabada Wadooyinka Muhiimka ah ee St. Louis
2019, Downtown Dutchtown waxay la bilowday iskaashi Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri si ay u noqoto degmadii ugu horeysay ee UrbanMain ee Missouri. Barnaamijka UrbanMain waa la fidiyay si uu u noqdo Initiative Wadooyinka Muhiimka ah ee St. Louis, oo leh meelaha kale sida Laclede's Landing iyo marinka Delmar ee barnaamijka ku soo biiray.
Hindisaha Wadooyinka Muhiimka ah ee St. Louis waa soo socdaa Habka Afarta Qodob ee Waddada Weyn, xoogga saaraysa naqshadaynta, dhaqaalaha, horumarinta, iyo abaabulka. Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown waxay abuureen afar siday u kala horreeyaan gudiyo in qodob walba diiradda la saaro iyadoo maanka lagu hayo habkan.
Dhamaadkii 2021, Waddooyinka Weyn ee Dutchtown waxay qaateen a Qorshe Hawleed Dhamaystiran taasoo hagi doonta shaqada guddiyada sanadaha soo socda.
Maxay Qabteen Guddiyada Dutchtown?
Sida ku xusan, ka Guddiyada Dutchtown waxay mas'uul ka yihiin hagida iyo fulinta hadafka iyo shaqada Waddooyinka Weyn ee Dutchtown. Xubin ka mid ah Guddiga Agaasimayaasha Waddooyinka Weyn ee Dutchtown iyo xubin guud oo ka tirsan bulshada ayaa wada-guddoomiyaan guddi kasta. Guddiyada sidoo kale waxaa ku jira xubno kale oo bulshada ka tirsan oo jeclaan lahaa inay ka qayb qaataan.
Guddiyada Dutchtown waxay gacan ka geysteen horumarinta Qorshe Hawleed Dhamaystiran oo ay bulshadu xog-ogaal u tahay. Qorshuhu wuxuu gacan ka geysan doonaa jiheynta shaqada guddiyada 2022, sidoo kale waxaa la heli doonaa talooyinka joogtada ah ee bulshada, xubnaha guddiga, iyo guddiga.
Hoos waxaa ah dib u koobinta waxa ay qabteen Guddiyada Dutchtown 2021 iyo waxay u qorsheeyeen 2022.
Guddiga Nadiifinta & Cagaaran ee Badbaadada ah ee Dutchtown waxay ku biireen Guddiga Naqshadda Dutchtown sanadka 2021 si ay si wanaagsan ula jaanqaadaan Waddada Weyn ee afar-dhibcood. Sida dallada Guddiga Naqshadeynta, guddi-hoosaadyadu waxay raadiyaan hagaajinta goobaha dadweynaha, waxay qabtaan dadaallo qurxin iyo nadiifin, waxayna raadiyaan fursado lagu wanaajiyo nabadgelyada xaafadda.
Waxyaabihii ugu muhiimsanaa 2021 waxaa ka mid ah:
The Barnaamijka Adeegga Qurxinta Xaafada, iyadoo lala kaashanayo Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown, Xiriirka Shaqada, Iyo Hoyga loogu talagalay Aadanaha St. Louis: Xubnaha kooxda qurxinta waxay gaaf-wareegayaan raadka CID-da si ay si joogto ah u faarujiyaan qashinka ugana soo saaraan qashinka degmada oo dhan. Xubnaha kooxda waxa laga soo kiraystaa bulshada Dutchtown waxayna ku bilaabaan $15 saacadii.
Dhacdooyinka nadiifinta Xaafadda oo dhan: Mid ka mid ah nadiifintayada ugu guulaha badan waxay ahayd Nadiifi dayrta 2021, iyadoo lala kaashanayo SLACO (Ururka St. Louis ee Ururada Bulshada) iyo shaqaale xoojiye kubbadda cagta oo ka kala yimid agagaarka St. Louis waxaa ka go'an inay kor u qaadaan isboortiga Dutchtown. Guddiga Nakhshadeynta ayaa sidoo kale la midoobay Maalinta Dhulka365 dadaal nadiifin oo weyn, soo jiidashada daraasiin mutadawiciin ah inkastoo cimiladu xumaatay.
Barnaamijka Tijaabada Shabakadda Camera Network ee gudaha CID-da Dutchtown: CID-du waxay ku rakibtay kamarado Flock ah oo leh akhriyeyaal taargo liisan ah oo ku yaal dhowr dhibcood oo raadraaca degmada si ay uga hortagto dembiyada una bixiso caddaynta muuqaalka iyo xogta gaadiidka haddii shil dhaco.
Jooji abaabulka: Gudiga Nakhshadeynta ayaa ka shaqeeyey in ay isku soo dhaweeyaan derisyada xaafado ka tirsan iyagoo abaabuley xaflado block ah, iyaga oo siinaya fursado ay ku kulmaan oo ay isku bartaan, iyo sameynta shabakado isgaarsiineed.
2022, Guddiga Naqshadeynta ayaa sii wadi doona raadinta fursadaha si ay u horumariyaan fikradaha iyo xaqiiqooyinka Dutchtown. Dadaalladan waxaa ka mid ah dadaallada nadiifinta ee socda, mashaariicda farshaxanka dadweynaha, calaamadaynta xaafadda iyo hab-raadinta, ku darida deris cusub shabakadeena blocks habaysan, iyo kor u qaadida dhaqdhaqaaqa goobaha dadweynaha. Intaa waxaa dheer, iyadoo lagu saleynayo natiijooyinka rakibaadda bilowga ah, kamarado badan ayaa laga yaabaa inay imaanayaan waddooyinka waaweyn ee CID-da Dutchtown sanadka 2022 taasoo qayb ka ah Shabakadda Kamaradaha Curated. Guddiga Nakhshadeynta ayaa sidoo kale si dhow ula shaqeyn doona Qorshaha Gravois-Jefferson Guddiga Dib-u-eegista Nakhshadeynta si ay u horumariyaan Isticmaalka Gaarka ah ee Degmada dhiirigelinta horumarinta ganacsi ee loo siman yahay.
Co-kursi: Joel Silliman iyo Amanda Fair
Kala xiriir guddiga naqshadeynta Dutchtown at design@dutchtownstl.org
Guddiga Dhaqaale ee Dutchtown wuxuu diiradda saarayaa soo jiidashada maalgashiga iyo xoojinta bulshada ganacsiga Dutchtown. Guddigu waxa ay sahan ku samaynayeen hantida jirta iyo ururinta xogta fursadaha suurtagalka ah.
Guddiga dhaqaalaha dhaqaalaha ayaa sheegay in 2021, Dutchtown waxay aragtay in ka badan $500,000 oo lagu maalgaliyay horumarinta guud iyo kuwa gaarka ah ee Dutchtown rubuci saddexaad oo keliya. Intaa waxaa dheer, saddex iyo toban ganacsi oo cusub ayaa furmay, iyaga oo abuuray 24 shaqo oo waqti-buuxa ah.
Qorshayaasha 2022 waxa ka mid ah qiimaynta iyo wax ka qabashada shaqooyinka banaan ee ganacsiga ee xaafada iyada oo loo marayo khariidaynta xogta, suuq-geynta fursadaha goobaha ganacsi ee banaan, iyo raadinta maalgashi la beegsanayo ee guryaha ganacsi ee muhiimka ah. Guddigu waxa kale oo uu qorshaynayaa in uu ururiyo ilo kale oo waxbarasho, maaliyadeed, iyo taageero kale si loo xoojiyo ganacsiyada jira iyo in laga caawiyo bilawga cusub si ay u hirgalaan.
Co-kursi: Jarred Irby iyo Nate Lindsey
Kala xidhiidh Guddida Dhaqaale ee Dutchtown at ev@dutchtownstl.org
2021 waxa uu ahaa sanad munasib leh, oo ay ka mid yihiin xaflado kala duwan oo ay soo qaban qaabiyeen gudiga horumarinta Dutchtown.
Qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee 2021:
Dutchtown Xagaaga Vibes: Bishii Juun, waxaan ku soo dhawaynay boqolaal qof oo ka kala yimid xaafadda iyo meelo ka baxsan Downtown Dutchtown si ay ugu qabtaan dabbaaldegga waddooyinka xagaaga oo ay ku jiraan muusig toos ah, cunto iyo cabitaan, iibiyayaal maxalli ah, iyo wax ka badan.
Habeenada Filimka DutchtownSannad saddexaad, Habeennada Filimka xagaaga ee Marquette Park waxay soo jiiteen qoysaska xaafadda oo dhan madadaalada saaxiibtinimo ee qoyska. Waxaan xilli ciyaareedka ku xidhnay filim quusitaan ah oo ku yaal barkadda Marquette Park.
Dib-u-soo-celinta iyo dib-u-bixsiinta Waddooyinka Muhiimka ah ee Dutchtown xagaaga 2021: Waxaan ku dabaaldegnay magacayada cusub iyo jihada cusub anagoo la kaashanayna xaflad is biirsaday iyo lacag ururin Xarunta Hal-abuurka Xaafadda. Magaca cusub iyo summada cusub waxay si fiican uga tarjumaysaa himilada ururka oo waxay la jaan qaadayaan dadaallada lagu horumarinayo astaanta loo socdo ee Dutchtown.
Faafinta ereyga: Waxaan sii wadnay horumarinta xaafadda Dutchtown anagoo adeegsanayna mareegaha DutchtownSTL.org iyo kanaalada warbaahinta bulshada, anagoo bixinayna wararka ku saabsan dhacdooyinka bulshada, la wadaaga kheyraadka deriska, Iyo faafinta hadalka ku saabsan waxyaalaha waaweyn ee ka dhacaya Dutchtown. (Hubi inaad nagu raacayso Facebook, Twitter, Iyo Instagram!)
Sannadka soo socda, Guddiga Gudbintu waxay qabanqaabin doonaan xaflado dhismeed oo badan, sida dabbaaldegyada Xagaaga Xagaaga ee Dutchtown ee sannadlaha ah, habeennada filimada, iyo dhacdooyin cusub oo deriska ah si ay isula falgalaan oo ay ugu dabaaldegaan Dutchtown. Bisha Maarso, guddiga ayaa qorsheynaya mid kale Tag Dutch! dhacdo hanti ma guurto ah kaas oo soo bandhigi doona iibsadayaasha guryaha markii ugu horeysay xaafadda oo la wadaagi doona agabka si ay gacan uga gaystaan ​​lahaanshaha guri mid dhab ah. Guddigu waxa kale oo ay sii wadi doonaan horumarinta summada xaafadda Dutchtown iyo sumcadda si ay u soo jiitaan xiise cusub iyo ka qaybgalka deriska iyo booqdayaasha gobolka oo dhan.
Co-kursi: Nick Findley iyo Adina O'Neal
Kala xidhiidh Guddida Horumarinta ee Dutchtown at promotion@dutchtownstl.org
Guddiga Ururka Dutchtown wuxuu ka shaqeeyaa sidii uu isku waafajin lahaa dadaalka guddiyada kale iyo hubinta inay fulin karaan ujeeddooyinkooda. Dadaalka dhaqaale ururinta guddiga ayaa la soo qaaday deeqo iyo kafaalo-qaadka heerar aan hore loo arag oo ururkeena ah. Intaa waxaa dheer, mutadawiciin cusub iyo xubnaha guddigu waxay u hureen boqolaal saacadood xagga horumarinta xaafadda.
2022, Guddiga Ururku waxa uu rajaynayaa in uu balaadhiyo awoodiisa si uu u raadsado ilo cusub oo maalgalin ah iyada oo loo marayo deeq-bixiyeyaal dheeraad ah, kafaalo-qaadyo, iyo deeqo. Intaa waxaa dheer, guddigu wuxuu sii wadi doonaa ballaarinta saldhigga iskaa wax u qabso oo uu ku martiqaadi doono derisyo badan si ay uga qaybqaataan annaga Guddiyada Dutchtown ee ay bulshadu wadato.
Labada kursi: Lyndsay Baruch iyo Paula Gaertner
Kala xidhiidh Guddida Ururka Dutchtown at organization@dutchtownstl.org
Waxyaabo badan oo 2021 ah
Marka la dhiirigaliyo deeq-bixiye deeqsi ah (mahadsanid, Caymiska Crawford-Butz!) Waddada Meramec ayaa martigelisay tii ugu horreysay Dutchtown Xagaaga Vibes dabbaaldegyo horraantii Juun 2021. Munaasabaddu waxay keentay muusig toos ah, dukaamaysi xaafadeed, cunto, iibiyeyaal soo booday, loo shaqeeyayaasha, iyo qaar kaloo badan xaafadda Downtown Dutchtown. Inkasta oo kulaylku aad u sii kululaanayo, boqolaal deris ah oo ka yimid Dutchtown iyo meelo ka baxsan ayaa u soo baxay inay dabaaldegaan.
Wax badan ku qabata Marquette Park
Barkadda Marquette Park
Ka dib markii la xidhay xagaagii 2020, Marquette Park Pool ayaa dib loo furay 2021. Waxaan ku faraxsanahay inaan daaha ka qaadno alaabo cusub oo qolka fadhiga loogu talagalay macaamiisha barkadaha, oo lagu helay guul guul leh. 2019 dadaalka lacag ururinta taas oo soo aruurisay $7,000 si ay ugu keento raaxo cusub iyo midab firidhsan barkadda dibadda ee kaliya ee xorta ah ee dhanka Koonfureed.
Maxkamada Futsal ee Cusub
Iyadoo lala kaashanayo kooxda cusub ee St. Louis CITY SC Major League Soccer, oo ay weheliso Waaxda Beeraha ee Magaalada St. Louis iyo dhowr deeq-bixiyeyaal gaar ah, Marquette Park waxay hadda hoy u tahay maxkamada futsal ee ugu horeysay banaanka ee St. Louis. Futsal waa ciyaar kubbadda cagta hoos loo dhigay, oo aad u heli kara kooxaha yaryar iyo ciyaartoyda cusub. Hiwaayadaha maxalliga ah iyo taageerayaasha kubbadda cagta ee waqtiga dheer waxay si joogto ah u tagaan maxkamadda si ay xirfadahooda ugu bartaan ciyaartan xiisaha badan, degdegga ah, soo socota. Maxkamaddu waxa ay leedahay sawir qurux badan oo Dutchtown-ku dhiiri galiyay oo uu naqshadeeyay farshaxan maxalli ah Jayvn Solomon iyo yoolal la sameeyay oo caado ah oo isboorti oo isboorti xaafadda Dutchtown.
Sannad saddexaad, waxaanu ku soo dhawaynay derisyada Marquette Park madadaalo xagaaga qoyska-saaxiibtinimo Shaashadayada weyn ee 22-foot ah. Bandhigeena Juun ee Jacka Park Dabaaldegga Xagaaga Vibes ee Dutchtown wuxuu ahaa Habeenka Filimada ee sida wanaagsan uga soo qayb galnay ilaa maanta. Bishii Ogosto, waxaan dejinay barkadda Marquette Park si aan u tuso Coco taas oo ka keentay derisyo dhan si ay ugu raaxaystaan ​​barkada maalinta xidhitaanka 2021.
Maalinta Bulshada Marquette
Wada-hawlgalayaashayada at Maalinta Bulshada Marquette qabtay heer sare dhacdo-dugsiyeedka Xaruntii Marquette Park ee Ogosto 2021. MCD waxay siisay boqollaal carruur ah boorsooyinka dhabarka iyo agabka dugsiga, dhar, timo jarrida, iyo in ka badan. Munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay cunto, maaweelo, iibiyeyaal, iyo agabyo ka kala yimid ururro bulsho iyo adeeg bixiyayaasha.
Ku soo dhawaynta meheradaha cusub ee Dutchtown
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno dhowr meherado cusub Dutchtown 2021. Ha i iloobin aniga oo aan ahayn Boutique keenaa xulashada la soo xulay ee dharka dumarka casriga ah, dahabka, agabka, iyo alaabta daryeelka jidhka ee Virginia Avenue. Albaabka xiga, Naqshadaynta Hal-abuurka Naqshadaha Naqshadeynta wuxuu bixiyaa hadiyado-mid-nooc ah iyo dhar gaar ah.
Dhinaca kale ee Virginia, Cashadaada Meesha laga furay meeshii hore ee Barley Iron, oo bixisa cunto nafeed oo heersare ah, baar buuxa, iyo jawi soo dhawayn leh. Sidoo kale Virginia, Calaamadda Shatbada Times waxay u bedeshay salon timaha hore u ahaa dukaan cusub oo cajiib ah oo martigeliya qaar ka mid ah farshaxannada tattoo ugu tayada badan ee St. Louis.
The Hoolka Cuntada ee Xaafadaha Cunista Magaalada waxay balaadhiyeen doorashadooda saddex baayacmushtar oo cusub-Sugoi Sushi, Dhammaantood waa la duubay, Iyo Kareemada iyo Daawaynta. Dhammaan saddexduba waxay heleen dib u eegis aad u wanaagsan maadaama ay keeneen noocyo kala duwan oo daaweyn dhadhan fiican leh Dutchtown. Guud ahaan Meramec, Indhaha u furmay sidii goob tafaariiqle ah oo la wadaago, taasoo siinaysa baayacmushtarka maxalliga ah iyo fanaaniinta meel soo dhawayn ah oo ay ku iibiyaan alaabtooda.
Tabarucayaasha: Laf-dhabarta Waddooyinka Muhiimka ah ee Dutchtown
Hadda, Dutchtown Main Streets waa urur tabaruc ah oo dhan. Iyo 2021, mutadawiciintu waxay geliyey boqolaal saacadood oo shaqo xaafadda ah.
Tabarucayaashayada, oo ay ku jiraan kuwayada Board of Directors, run ahaantii waxaas oo dhan samee - laga bilaabo hawlaha xafiiska dambe ee xisaabinta, lacag ururinta, iyo suuqgeynta, ilaa shaqada daalan ee nadiifinta xaafadaha iyo soo jiidashada qalabka dhacdooyinka. In ka badan 50 deris ayaa waqtigooda, xirfadahooda, iyo shaqadoodii ku darsaday xaafadda Dutchtown 2021, taasna, ma aad u mahadcelin karno.
Dabcan, waxaan had iyo jeer isticmaali karnaa caawimo badan. Tixgeli inaad ku biirto mid naga mid ah Guddiyada Dutchtown si aad u barato sida aad ugu lamaanayn karto danahaaga iyo xirfadahaaga baahiyaha xaafadda. Ama isha ku hay dhacdooyinka nadiifinta iyo fursadaha kale ee tabaruca ah ee gacanta lagu hayo.
The Rabshadaha Curyaannimada barnaamijka, oo laga bilaabay Dutchtown dabayaaqadii 2020, ayaa muujiyay saamayn wayn xaafadda. Rabshadaha daaweynta waxay u wajahaan rabshadaha qoryaha sida cudur faafa caafimaadka dadweynaha waxayna ujeedadoodu tahay in wax laga qabto sababaha asaasiga ah ee dembiyada iyo in la jebiyo wareegga rabshadaha.
Dhex-dhexaadiyeyaasha rabshadaha loo tababaray ayaa dhexdhexaadiyay khilaafyo aan tiro lahayn ka hor inta aanay xaaladuhu u gudbin gacan ka hadal iyo aargoosi. Kooxda Rabshadaha Daaweyntu way dhaafsiisan yihiin waxqabadyadaas si ay u caawiyaan dhinacyada inay helaan shaqooyin, helaan qiimaynta caafimaadka dhimirka iyo daawaynta, oo ay u bixiyaan adeegyada kale ee bulshada si ay uga weeciyaan dembiilayaasha suurtagalka ah rabshadaha iyo fal dambiyeedka.
Laakin Kooxda Rabshadaha Daaweyntu kuma eka. Waxay ahaayeen kuwo joogto ah oo ka qaybqaata munaasabadaha xaafadda, gacan-siinta gacmaha si ay uga caawiyaan nadaafadda, ka-qaybgalka xubnaha bulshada, iyo taageeridda dadaallada ballaaran ee lagu dhisayo Dutchtown ka wanaagsan qof walba. Xiriirka Shaqada waxay maamushaa barnaamijka Rabshadaha Daweynta ee Dutchtown, waxayna ahaayeen lammaane aad u xiiseeya oo kafaala-qaada dhacdooyinka iyo barnaamijyada nooc kasta ah.
Wada-hawlgalayaashayada at Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown ayaa aad ugu hawlanaa fulinta shaqada Qorshaha Xaafadaha Gravois-Jefferson. Magaalada St. Louis way aqbashay qorshaha, Waddooyinka Weyn ee Dutchtown waxay kala shaqeysay DSCC si ay u isticmaasho qorshaha hage shaqadeena gaarka ah.
Kooxda Horumarinta Lutheran
2021 waxa lagu xidhay warar cajiib ah: horumarinta guryaynta aan faa'iido doonka ahayn ee maxaliga ah Kooxda Horumarinta Lutheran loo hubsaday maalgelin si ay u bilaabaan shaqadooda Mashruuca Guryaha Marquette. Mashruucu wuxuu keeni doonaa 60 guri oo cusub oo la awoodi karo Dutchtown iyo Gravois Park. Guryaha Marquette waxaa ku jiri doona dhismo cusub iyo dayactirka guryaha aadka u xumaaday, oo ay ku jiraan dhismaha muddada dheer la dayacay ee ku yaal 3305 Meramec Street ee wadnaha Downtown Dutchtown.
Kooxda Horumarinta Lutheran ayaa hore u hogaaminaysay Horumarinta Beerta Chippewa, Mashruuc kale oo weyn, oo goob firidhsan oo dib u habeyn lagu sameeyay 15 dhismo oo ku yaal Dutchtown iyo Gravois Park. Waxay sidoo kale ahaayeen kafaala-qaade xamaasad leh dhacdooyin badan oo xaafadaha ah.
Hindisaha Guryeynta ee St. Joseph
Urur kale oo bedelaya Dutchtown waa Hindisaha Guryeynta ee St. Joseph. SJHI waxa ay fulisay mashruucyo waaweyn oo dib u habeyn ah oo ku yaalla dhammaan darafyada koonfureed ee xaafadda, ka dibna ka caawinta qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah inay iibsadaan guryaha oo ay horumariyaan badbaado dhaqaale iyo madaxbannaani. St. Joseph Housing Initiative waxa uu dhaafsiisan yahay caawinta iibsadayaasha guryaha iyadoo la shaqaynaysa deris cusub si ay ula macaamilaan bulshada ugana caawiyaan dhisidda xaafad adag. Macaamiisha SJHI xitaa way bilaabeen habayn baloogyada agagaarka guryahooda cusub.
Waad ku mahadsan tahay Deeq-bixiyayaashayada
Waxaan helnay Maalinta Siinta STL ee 2021 si guul leh, iyadoo ay ugu mahadcelinayaan deeq-bixiyeyaashii hore iyo kuwa cusub, oo ay la socoto deeq deeqsinimo ah oo ku habboon Caymiska Crawford-Butz. Maalin ka mid ah bishii Maajo, waxaan aruurinay $10,000 oo cajiib ah.
Sannadkii hore, waxa aanu dejinay yool sare oo ah in aanu ku helno $10,000 gudaha joogtaynta deeqaha soo noqnoqda. In kasta oo aynaan si dhab ah u gaadhin yoolkaas, haddana waxaa jira fursado badan oo lagu gaadho yoolka Caawinaada. A joogtaynta deeqda bil kasta Qadar kasta oo ay tahay waxay hubisaa in Waddooyinka Weyn ee Dutchtown ay sii wadi karaan inay diiradda saaraan shaqada aasaasiga ah ee bulshada ay hoggaamiso ee Dutchtown.
Waxaad samayn kartaa tabarucaada joogtada ah ama waxaad wax ku darsan kartaa hal mar goobta Dutchtownstl.org/donate.
Deeqdu waa cajiib, laakiin taasi maaha habka kaliya ee lagu caawin karo. Wadooyinka Dhexe ee Dutchtown waxay ku tiirsan tahay ka qaybgalka derisyada firfircoon iyo kuwa hawlan iyo la-hawlgalayaasha bulshada si ay gacan uga geystaan ​​dhisidda xaafad firfircoon oo kobcaysa Dutchtown qof kasta.
Waxaan mar walba u baahanahay tabaruceyaal cusub iyo aragtiyo cusub. Ku biir mid naga mid ah Guddiyada Dutchtown-Naqshad, Dhaqaale Dhaqaale, Horumarin, iyo Abaabulan-si aan gacan uga geysanno qorsheynta mustaqbalkeenna oo aan qabanno shaqada asaasiga ah ee beddeli doonta bulshadeena. Wax dheeri ah baro oo halkan iska qor, ama email info@dutchtownstl.org caawinaad helida fursadaha iskaa wax u qabso ee kugu habboon.
Ama, soo bax oo tus taageeradaada. La kulan deriskaaga, raaxayso, oo arag dhammaan waxa Dutchtown ay ku bixiso dhacdooyinka xaafaddayada. Mar walba waxaad ka ogaan kartaa waxa ka socda dutchtownstl.org/calendar.
Filimka hoos Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown. Muuji dhamaan qeybaha. Dutchtown iyo Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay April 17th, 2022 .
DutchtownSTL.org Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown Warbixinta Sannadlaha ah ee Waddooyinka Weyn ee Dutchtown 2021